Sosialy Archives - Page 131 sur 154 -
Faritra Sava : Ny 80% n’ireo fambolena fihariana no potika tanteraka
Mahatratra 80% n’ny seha-pihariana eo amin’ny sehatry ny fambolena any amin’ny faritra Sava no potika tanteraka vokatry ny fandalovan’ny rivodoza Enawo tany an-toerana ny herinandro lasa teo. Ny voly vanilina, jirofo, ary ny Kafe no …Tohiny
Vidin’entana any Antalaha : Anjakan’ny mpanararaotra
Tsy mitsinjo ny mpanjifa. Izay no azo ilazana ny fomban’ireo mpivarotra taorian’ny fandalovan’ilay rivodoza Enawo teo. Amin’izao fotoana izao mantsy, nanararaotra nampiakatra ny vidin’entana ny ankamaroan’ireo mpivarotra any Antalaha. Tsy misy entana izay tsy miakatra …Tohiny
Traboina : Nitondra ny anjara birikiny ny GDPEM
Tsy nitazam-potsiny manoloana ny voina mihatra amin’ny mpiray tanindrazana aminy, vokatry ny fandalovan’ny rivo-doza « Enawo », fa nitondra izay voatsirambin’ny tanany ihany koa ny fivondronan’ny olon-tsotra sy orinasa matihanina momba ny angovo eto Madagasikara na ny …Tohiny
Fandalovan’i « Enawo » : Tafiakatra 06 no maty, 10.000 no tsy manan-kialofana
10/03/2017 admintriatra 0
Olona enina no namoy ny ainy ary mahatratra 10.000 ireo tsy manan-kialofana manerana an’i Madagasikara , vokatry ny fandalovan’ilay rivo-doza “Enawo”, nanomboka ny 07 Marsa lasa teo. Mbola nitohy omaly tapak’andro maraina izany teto amin’ny …Tohiny
Fanandratana olon-tsambatra tao Vohipeno : Nanome voninahitra ny Filoham-pirenena mivady
Notanterahina tany vohipeno, omaly alahady 15 aprily, ny fanandratana olon-tsambatra an-dramose Botovasoa Lucien. Ho fanomezan-boninahitra izany fotoana izany, dia tonga nanotrona ny sorona masina lehibe ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery mivady, notronin’ireo mpikambana sasantsasany ao amin’ny ...Tohiny
Hery Rajaonarimampianina : Izy no safidim-bahoaka